SYDNEY (ICC) - wemuAustralia wose-mutenderi Ellyse Perry akahwina mubairo weRachael Heyhoe-Flint Award yeICC Women's Cricketer yeGore uye akatumidzwawo seICC Women ODI Player yeGore, International Cricket Council yakazivisa neChipiri, 17 Zvita.
Perry anga aine gore rakanakisa pamafomati, aine mazana matatu, kusanganisira rimwe muVakadzi Vemadota Test. Iye anoverengera 73,50 kubva pagumi nemaviri maODD gore rino, kwaakatora makumi maviri nematanhatu, kusanganisira rekodhi yenyika 7/12. Akava mutambi wekutanga kupedzisa chiuru chekumhanya uye zana ma wiketi 100 muT20I kiriketi.
"Kukudzwa kunoshamisa uye ndinotya kushamiswa, ndichifunga kuita kwakawanda kwakaitika gore rose," akadaro Perry, uyo akahwina mubairo weRachael Heyhoe-Flint kekutanga mumakore matatu - kekutanga se akaunziwa muwina 2017.
"Zvinoshamisa kubvumwa uye ndinozvikoshesa." Iyi inzira yakanaka kwazvo yekupedzisa gore pachinyorwa. ”
Paakatumidzwa zita rekuti ODI Player yeGore, Perry akati, "Zvave zvakanaka kuve nemukana wekushanyirana zvakadaro nechikwata cheAustralia. Rave riri gore rinoshamisa, ndakanakidzwa nezvaro zvese uye zvave zvichinakidza kuva chikamu chazvo.
"Zvinonakidza kuti T20 World Cup iri pano kumba kutanga kwegore rinouya uye nechinangwa chekupedzisira paMCG inogona kuve nguva yakakosha munhoroondo yemutambo."
Perry akatonga crease yose muna 2019 padivi achivhura mukwanyina uye waakawana mubairo Alyssa Healy.
Akatumidzwa saT20I Cricketer yeGore regore rechipiri achimhanya, Alyssa Healy akapinda mumabhuku rekodhi munaGumiguru, achipora rekodhi yenyika 148 * pamabhora makumi matanhatu neshanu akatarisana neSri Lanka - chikoro chepamusoro kwazvo nemukadzi muT20Is. Watch-muchengeti wemubhadharo wakasvika hafu yezana-makumi maviri kubva pamabhora makumi maviri nemashanu uye musikana wake zana kungori 46, yezana remakore anokurumidza kupfuura akamboitwa nemurume kana mukadzi weAustralia.
"Ndiri kufara chaizvo kupihwa T20I Cricketer yeGore," akadaro Healy.
"Chikwata chevakadzi veAustralia chakave nemwedzi gumi nemaviri chakanakisa uye takatamba kiriketi chaiyo yeT20. Panguva iyo mubairo wega wega wakandinakira pachangu, ndinofunga zvaive zvakanaka kuona timu yedu ichitamba zvakanaka nguva yese yemwedzi gumi nemaviri, kunyanya ichitungamira kuenda kuWorld Cup mu20020. ”
Vaviri Perry naHealy vakapiwazve mazita muzvikwata zvevakadzi zveODI uye T20I yegore, padhuze nemumwe mutungamiriri wechikwata cheAustralia uye chenyika Meg Lanning, uyo anonzi anoteedzana nezvose zviri makumi mashanu uye pamusoro-makumi maviri emativi.
NaPry, Healy, uye Kutanhamara kunozivikanwa mune yegore negore ICC Women's Cricket Awards, vakadzi veAustralia kiriketi vanozviwana mune chimwe chinhu chenguva yegoridhe panguva chaiyo chaiyo.
"Kukudzwa kukuru kutumidzwa kuti kaputeni weICC ODI neT20 Teams yeGore pamwe nevamwe vatambi vanoshamisa," akadaro Lanning.
"Iri rave mwaka unoshamisa kuchikwata cheAustralia uye tiri kutarisira matambudziko achauya muna 2020.
"T20 World Cup pamusha mukana unouya kazhinji, asi isu tiri kutarisira uye nekugamuchira mukana wekuita zvakanaka pamberi peboka repamba pedu."
Akapihwa No.1 mumafomu ese One-Day uye T20 International mafomu, ICC Vakadzi T20 World Cup vatambi veWorld Cup vachasuwa kuchengetedza zita ravo paivhu repamusha, munhandare huru yenyika yekiriketi pamberi pegungano renyika nyowani rekodhi mutambo wevakadzi.
ICC Women's T20 World Cup 2020 yekupedzisira icharidzwa paMelbourne Cricket Ground pazuva reWomen's Day, Svondo 8 Kurume 2020.
Kutanga muSydney musi wa 21 Kukadzi, mutambo uyu uchaona Thailand ichikwikwidza kumutambo wavo wekutanga-Mukombe wePasirose - mumakirike evakadzi kana evarume, T20I kana makumi mashanu.
Kugoneswa kwakavimbiswa muScotland pakutanga kwegore rino kuICC Women's T20 World Cup Qualifier 2019, tichitenda muchikamu chikuru kusvika pamatanho gumi nemaviri nemakumi matanhatu kubva kuna Bowler Chanida Sutthiruang, uyo akatumidzwa zita rekuti ICC's Emerging Cricketer yeGore.
Iye ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuzvarwa ruoko anofambisa ruoko rwakabudirira rwakakura nerutivi rwenyika gore rino sezvavakaisa nyika nyowani yenyika gumi neshanu dzakatevedzana T20I kukunda, vakatora kukunda mune quadrangular dzakateerana neIreland, Scotland neNetherlands uye vakapedza pamusoro pavo ICC T20 World Cup Qualifier World boka.
"Panzvimbo yeICC ndinoda kutenda kwazvo nemwoyo wose kuna Ellyse, Alyssa naChanida pamusoro pevakafanirwa kurumbidza vamwe nevamwe vatambi vakaita zvikwata zvegore," akadaro Manu Sawhney, mukuru weICC .
"Ini ndinoda kubhadhara mutero kuna Ellyse mukukunda vese Rachel Heyhoe-Flint trophy uye ODI Cricketer yeGore." Akawana zvakawanda mumwedzi gumi nemaviri apfuura uye achive kiriketi wekutanga munhoroondo kupedzisa zvakapetwa ka1 000 kumhanya uye mawikendi zana muT20 nyika cricket chiitiko chakasiyana.